» “प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिको, मिलेमतोमा संविधानलाई, धुजाधुजा पारियोः डा.रामवरण यादव, “प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिको, मिलेमतोमा संविधानलाई, धुजाधुजा पारियोः डा.रामवरण यादव, – हाम्रो खबर
“काठमाडौं । प्रथम राष्ट्रपति डा.रामवरण यादवले सत्ताको छिनाझप्टीमा लागेर प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिको मिलेमतोमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, नेपालको संविधानलाई धुजाधुजा पारिएको बताएका छन् । सातौं संविधान दिवसको अवसरमा नेपाली रेडियो नेटवर्कको कार्यक्रम नेपाली बहसका लागि आज बिहान पत्रकार ऋषि धमलासँग विशेष कुराकानी गर्दै प्रथम राष्ट्रपति डा। यादवले जनताको निरन्तर पहरेदारी भयो भने यो संविधान सदियौं बाँच्ने विश्वास व्यक्त गरे । प्रस्तुत छ, डा। यादवसँगको कुराकानीको सम्पादित अंश
“सम्माननीय प्रथम राष्ट्रपतिज्यू, संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको संविधान जारी ,भएको सातौं वर्ष प्रवेश गरेको छ । ६ वर्षलाई विश्लेषण गर्दा हामी कहाँनेर चुक्यौं रु किन संविधान अक्षरशः कार्यान्वयन गर्न सकेनौं ?
-असोज ३ गते सम्पूर्ण नेपालीहरुका निम्ति बहुतै यादगार दिन हो । संविधान घोषणा गरेको दिन खुसीको दिन पनि हो । हाम्रो संविधान ६ वर्ष पार गरेर सातौं वर्षमा प्रवेश गरेको छ । जनताको ,सार्वभौमसत्ता र राजकीय सत्ता निहित रहेको थलो संविधानसभामा रहेका जनताको प्रतिनिधिबाट हामीले संविधान बनाएका थियौं ।
“यो संविधानमा लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक व्यवस्था छ, समानुपातिक प्रतिनिधित्वको ग्यारेन्टी छ । संघीयता सुनिश्चित गरिएको छ । धर्मनिरपेक्षता घोषणा गरिएको छ । त्यसो त धर्मका बारेमा यदाकदा कुरा उठेका छन् । तर सबै जना आआफ्नो धर्म, संस्कृति र परम्परा अघि बढाउन स्वतन्त्र छन् । सबै समुदायलाई समन्वय गरेर अघि बढ्नु हाम्रो जिम्मेवारी हो । हामीले संसारकै उच्चतम प्रविधि अपनाएर संविधान बनाएका हौं ।
“लोकतान्त्रिक गणतन्त्र उत्तम प्रणाली हो । संसदीय परम्परामा कार्यपालिका, न्यायपालिका र विधायिका तीन वटा खम्बा हुन्छन् । तिनले नै जनताका हरेक समस्या समाधान गर्छन् । विगतका त्रुटि केलाउँदाखेरि संविधानभन्दा, पनि त्यसको कार्यान्वयन गर्ने पात्रहरुका कारण हामी चुकेका हौं । सुपात्र भएको भए यस्तो स्थिति आउँदैनथ्यो ।
“तर ६ वर्षकै अवधिमा संसदीय ,व्यवस्थालाई समाप्त पार्ने या संविधानमाथि आक्रमण गर्ने दुस्प्रयास भइरहेका छन् नि ?
“जनताले हामीलाई यही कुरा भनिरहेका छन् । जबसम्म हामीले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रका मर्म र भावनाहरुलाई, आत्मसात गर्न सक्दैनौं, यस्ता अनेकन् घटना भइरहन्छन् । संविधान ६ वर्ष नलाग्दै मुलुकको कार्यकारिणी प्रधानमन्त्रीबाट संविधानमाथि सांघातिक आक्रमण भयो ।
“संविधानको सीमा र दायराबाहिर गएर दुईदुई पटक प्रतिनिधिसभा विघटन गरे । त्यसमा राष्ट्रपतिजस्तो ,संस्था पनि संलग्न भयो । दुइटा संस्था मिलेर लोकतन्त्रको तेस्रो खम्बा संसद्लाई ढाल्ने खेल भयो । सार्वभौमसत्ता समाप्त गर्ने खेल भए । तर सम्माननित सर्वोच्च अदालतले आफ्नो धर्म निर्वाह गर्यो र संविधानको धाराका दुईदुईचोटि व्याख्या गरेर ‘कोर्स करेक्सन’ गरिदियो ।
“यसले मुलुकलाई अस्थिरताबाट स्थिरतातिर लगेको छ । पाँच वटा दलको सरकार बनेको छ । संसद् विघटनविरुद्ध पाँच दल अदालतसम्म गए, मिडिया, देश र विदेशमा रहेका चेतनशील नेपालीले निरन्तर आवाज उठाए ।
“स्थिर सरकार, पूरै कार्यकालको संसद, महामारी नियन्त्रण होस्, पर्यटन, आर्थिक र कृषि क्षेत्रको पुनर्जागरण, जलवायु परिवर्तन आदि मुद्दामा ध्यान नदिई सत्ताको लोभमा संविधानलाई धुजाधुजा गरेको सही कुरा हो ।
“सात वर्षअघि तपाईंकै हातबाट यो संविधान जारी भएको हो । तपाईं स्पष्ट भनिदिनूस्, संविधानलाई ककसले धुजाधुजा पारे रु सांघातिक आक्रमण गरे ?
“मैले तपाईंलाई अघि नै भनिसकेँ । यहाँ जे जे भइरहेको छ, त्यो संविधानअनुसार भइरहेको छैन । एकछिन प्रधानमन्त्रीबाट भएको संसद् विघटनबारे विचार गर्नुस् । यसबारे राष्ट्रपतिले विद्वान संविधानविद्हरुलाई बोलाएर छलफल गर्न सक्नुहुन्थ्यो ।
“आवश्यकता अनुसार विदेशबाट पनि संविधानविज्ञ झिकाएर राय लिन सकिन्थ्यो । र, त्यसलाई ‘विद् ड्र’ गर्न पनि सकिन्थ्यो । प्रधानमन्त्रीबाट ,बारम्बार अध्यादेश आयो, उहाँले नसोधीकन सही गरिदिनुभयो । जनताले चाहेको सुशासन र पारदर्शिता हो । तर त्यसको उल्टो भइरहँदा नेपाली जनता दिक्क छन् । आज हेर्नोस्, सदन ठप्प पारेर बजेट होलिडे ,गराउनु घृणित काम हो ।
“सरकारले यसबारे विपक्षसँग, कुरा गरेर लोकतान्त्रिक विधि र संविधानको मर्म अनुसार संवाद गर्नुपर्थ्र्यो ।
“जसरी हामी कुनै पनि काम गर्नुअघि भगवान्लाई सम्झेर प्रणाम गर्छौं, जापानी संसद्मा प्रधानमन्त्री ,हुन् कि अरु नेताहरु रोस्ट्रममा उभिएर सम्पूर्ण शरीर झुकाएर प्रणाम गर्छन् । त्यो लोकतन्त्रको मन्दिरलाई सम्मान गरेको हो ।
“बेलायती संसद्मा सांसदहरु कहिल्यै कुस्ती खेलेको देखिएको छैन । त्यसैले त्यहाँको लोकतन्त्र परिवक्व छ । अमेरिकाको चुनाव डोनाल्ड ट्रम्पले ,को परिणाम स्वीकार गरेनन्, संसद्मा आक्रमण गरे । तर त्यहाँको निर्वाचन आयोग, अदालत डगमगाएनन् ।
“हामीकहाँ लोकतन्त्रको गाडीलाई राजमार्गमा ल्याउँदा प्रतिगामीहरुले पटक पटक अवरुद्ध गरेका इतिहास छन् । यो संसद् देशबासीको ,आशीर्वाद र अदालतले ब्यूँझाएका हुन् । यसलाई सकारात्मक रुपमा लिनुपर्छ ।
“दलहरुले सत्ता स्वार्थका लागि संविधानलाई संकटमा धकेले भन्नेदेखि लिएर संविधान संशोधनको आवाज पनि उठेको छ नि ?
“संविधानको कुरा गर्दा संयुक्त राज्य अमेरिकामा २ सय ४० वर्षको इतिहास छ । त्यहाँ तीसौं पटक संविधान संशोधन भएका छन् । हिन्दुस्थानमा ७५ वर्षको इतिहास छ । भारतमा पनि सवासय ,चोटि संविधान संशोधन भएको छ ।
“हामीले जनताको इच्छा र आकांक्षा अनुसार मधेस, थारु, जनजाति, दलितको माग लोकतान्त्रिक विधि अनुसार समाधान गर्नुपर्छ । कुन बेला संशोधन गर्ने हो, कहिले छलफल गर्ने हो, त्यो जनताका प्रतिनिधिले तय गर्छन् ।
“अब हामीले विगतका तीता कुरा गर्नुभन्दा ,पनि संविधानको दीर्घायुको कामना गरौं । हामी नेपाली भएर बाँचिराखौं । संविधानको मर्म अनुसार चल्दै जाऊँ ।
“हामीले संविधानसभाबाट संविधान त बनायौं । तर सुशासन दिन सकेनौं । सरकार अस्थिर भए । न्यायपालिका विवादरहित छैन । व्यवस्थापिका बन्धक बनेको छ । जनमत विभाजित ,भइरहेको छ । कतिपयले व्यवस्थाको विकल्प खोजिरहेका छन् । यसरी यो संविधान पचासौं वर्षसम्म दिगो रहन सक्ला ?
“सबै नेपालीले पहरेदारी गरेर अदालतले ठाउँमा ल्याइदिएको छ । यसरी जनताले पहरेदारी गरे भने यो संविधान ५० औं वर्ष मात्र होइन, सदियौंसम्म बाँच्ने मलाई विश्वास छ ।
“आज देशभरिका ३ सय रेडियोको सञ्जाल नेपाली रेडियो नेटवर्क पनि पाँचौं वर्षमा प्रवेश गरेको छ । तपाईंको केही सन्देश छ कि ?
“म नेपाली रेडियो नेटवर्कको उत्तरोत्तर ,सफलताको कामना गर्दछु । तपाईंहरुले व्यावसायिक धर्म पालना गरिरहनुस् । लोकतन्त्र र संविधान ,फलोस्, फुलोस् । नेपालको जय होस्, नेपालीको जय होस् ।